Thenga iMifepristone powder (84371-65-3) hplc =98% | AASraw
/ iimveliso / AmaHormones aseTyhini / Mifepristone powder (84371-65-3)
SKU: 84371-65-3. Udidi: AmaHormones aseTyhini
I-AASraw inokusetyenziswa kunye nokukwazi ukuvelisa kwigram ukuya kwi-mass order ye-Mifepristone powder (84371-65-3), phantsi komgaqo weCGMP kunye nolawulo lwekhwalithi ephezulu.
Mifepristone powder, eyaziwa nangokuthi ngu-RU-486, yindlela ephambili ye-antiprogesterone eyenziwa ngokubambisana kunye ne-misoprostol, i-prostaglandin analogue, ukunyusa ukukhipha isisu. Olu dibana lukhulu kune-95% esebenzayo ngexesha leentsuku zokuqala ze-50 zokukhulelwa. Kusebenza kwakhona kwi-trimester yesibini yokukhulelwa.
Ividiyo yeMifepristone powder
Mifepristone powder Abalinganiswa basisiseko
igama: Mifepristone powder
I-molecular Formula: C29H35NO2
Isisindo somzimba: 429.59
Isitoreji sokugcina: 1806241-263-5
Iintetho: 11-(4-(dimethylamino)phenyl)-17-hydroxy-17-(1-propynyl)-estra-9-dien-3-one ;11beta-[4-(n,n-dimethylamino)phenyl]-17alpha-(prop-1-ynyl)-delta4,9-estradiene ;17-beta)-(11-bet ;17beta)-11-[4-(dimethylamino)-phenyl]-17-hydroxy-17-(1-propynyl)estra-(11bet ;17-beta-hydroxy-11-beta-(4-dimethylaminophenyl-1)-17-alpha-(prop-1-ynyl)oest ;-17beta-ol-3-one ;4,9-dien-3-one ;r38486
Alpha: I-D20 + 138.5 ° (c = 0.5 kwi-chloroform)
Isitampu Sokugcina: 2-8 ° C
Ukusetyenziswa kweMifepristone powder kumjikelezo
I-Mifepristone powder (RU-486), iMifegyne, iMifeprex, nabanye
Isebenza njani i-Mifepristone powder
I-Mifepristone powder yayisetyenziselwa i-10th iveki yokukhulelwa (iintsuku ze-70 emva komhla wokugqibela wesithanga). Iyakumisa imveliso yakho yemvelo (progesterone) efunekayo ukuze ukhulelwe ukuqhubeka. Ngokuqhelekileyo isetyenziswe kwesinye isiyobisi esibizwa ngokuba yi-misoprostol. Ukuze uqiniseke ukuba unendawo efanelekileyo xa uthatha i-misoprostol ngenxa yokuphuma kwegazi, i-cramps, i-nausea, kunye ne-diarrhea ngokuqhelekileyo iqala ngaphakathi kwe-2 kwiiyure ze-24 emva kokuyithatha kodwa ingaqala kwiiyure ze-2. Ukuphuma kwintsholongwane okanye i-spotting ihlala i-9 kwiintsuku ze-16 kodwa ingahlala kwiintsuku ze-30 okanye ngaphezulu. Kumele ubuyele kumgqirha wakho ukuze uhlolwe okanye i-ultrasound 7 kwiintsuku ze-14 emva kokuthatha i-Mifepristone powder ukuqinisekisa ukuba ukukhulelwa kuye kwaphela kwaye ukujonga inani lokuphuma. Thatha i-Mifepristone powder ngokuchanekileyo.
Ngaba ukhuselekile ukusebenzisa iMifepristone powder
I-Mifepristone powder kunye ne-misoprostol ayibangele isidingo sokubeka esweni kwimeko yeklinikhi. Ukusetyenziswa okufanelekileyo kweMifepristone powder kunye ne-misoprostol ilula. Ngokungafani nezinye iziyobisi, ezifana ne-doxorubicin okanye i-penicillin yokujova, iliso kufuneka lenziwe phantsi kolawulo lugqirha ukuba lijonge ukusabela okukhawulezayo kunye nokulimala, iMifepristone powder. Ayikho i-misoprostol okanye i-dosing eyinkimbinkimbi kwaye ayibandakanyi ukubeka iliso kwiimeko ezinzima okanye ezinobungozi ngokukhawuleza ngexesha okanye emva kokukhawuleza.
Isilumkiso kwiMifepristone powder
Ayaziwa ukuba ukuthatha i-Mifepristone powder kuza kwandisa umngcipheko wegazi elikhulu. Phantse bonke abafazi abasebenzisa i-regimen ye-Mifepristone / i-misoprostol bafumana umyinge weentsuku ze-9-16 zeentlungu zesisu, i-uterine cramps, kunye nokuphuma kwegazi okanye ukuphaphaza. Ukufikelela ku-8% yabasetyhini bafumana uhlobo oluthile lokuphapha kwiintsuku ze-30 okanye ngaphezulu. Ezinye iziphumo eziqhelekileyo eziqhelekileyo ziquka ukuncwina, ubuthathaka, ukuhlanza, uhudo, isisu, ukukhathala kunye nomkhuhlane. Ukuba ezi ziphumo zihlala ixesha elide kuneeyure zokuqala ze-24 emva kokuthatha isicatshulwa sesibini (misoprostol), khangela uncedo lwezonyango ngokukhawuleza njengoko zinokuba yingxaki enkulu yonyango.
I-Mifepristone powder njengento yokukhusela ngokukhawuleza emva kokulala ngokwesondo esingakhuselekanga ('emva kwepilisi'); ukuphatha izicubu zesifo sengqondo, i-endometriosis (ukukhula kwezicubu ze-uterus ngaphandle kwesibeletho), okanye i-fibroids (izifo ezingenakunqanda kwi-uterus); okanye ukunyusa abasebenzi (ukukunceda ukuqala inkqubo yokuzalwa kumfazi okhulelwe). I-Mifepristone powder ayifanele isetyenziswe ukuba unesisu esingaqhelekanga esingaphandle kwesibeleko (ukukhulelwa kwe-ectopic). Ngeke kubangele ukukhupha isisu kule meko. Kungenza ukuba ukukhulelwa kwe-ectopic kuphule, kubangele ukuphuma kwegazi kakhulu.
Ukutshiza kunye ne-phlegm kuthetha ukuba isilwanyana sisebenza kule nyango, kodwa ukuhlenga nokuphuma kwamanye amaxesha kungabikho kwaye kubonisa ukukhulelwa. Ngako oko, kufuneka ubuyele zonke izihlandlo eziya kugqirha kunye nesicathulo sakho kunye ne-expectoration ingadluka kwiiyure ze-24 emva kokuthatha isilwanyana sesibini (Misoprostol). Ugqirha wakho unokukuyala ukuba uthathe amanye amayeza ukuze uncede ukuphatha le mpawu. Ukuba kukho enye yeziphumo ziqhubeka okanye zibuhlungu, xela ugqirha wakho okanye othemistiki ngokukhawuleza. Ukucocwa nokuhlola kungadlulisa iintsuku ze-30 kwaye kunokuba kunzima kunokuba kuqhelekile. Kwiimeko ezinqabileyo, ukuphuma kwegazi kuya kufuneka kupheliswe ngokuhlinzwa. Ukuba ulapha ngokwaneleyo, cwina i-2 epheleleyo yetsholongwane yee-napkins ii-2 iiyure ngosuku, okanye ukhathazeke ngokuphuma kwegazi, funa uncedo lwonyango ngokukhawuleza.
Ukuba le nkunkuma (i-Mifepristone tablet tablet) ayisebenzi kwiintsuku ze-2, ugqirha wakho unokunika elinye iyeza. Ukuba unesisu esiswini, ubuthathaka, isisu okanye ukuhlanza okanye uhudo ((urhudo), nceda ubize ugqirha wakho ngokukhawuleza ukuba uthatha amanye amayeza ngaphezulu kweeyure ze-24. Ufumana izibonakalisi zanoma yiyiphi inzame yokuphendula ngokuzibandakanya zibandakanya: ukukhawuleza, ukuvuthwa / ukukhukhuma (ikakhulukazi ubuso / ulwimi / umqala), ukuxakeka kanzima, ukuphefumla kanzima, kufuna unyango ngokukhawuleza.
Khumbula ukuba ugqirha wakho usuqalisile le nyilisi kuba sele sele egwebile ukuba inzuzo yakho inkulu kunomngcipheko weempembelelo. Ukuba unalolu hlobo lulandelayo olungenakwenzeka kodwa olubi kakhulu, celwa ugqirha wakho okanye ufonele unyango lwezonyango ngokukhawuleza: umkhuhlane phezu kwe-100.4 ° F (38 ° C) ngaphezu kweeyure ze-4, intlungu ebuhlungu okanye ububele obungaphantsi kwelinqeni, iCold , izinga lentliziyo okanye i-syncope.
Olu alukho uluhlu olupheleleyo lweempembelelo ezikhoyo. Ukuba ezinye iziphumo oziphawulayo zingaboniswa apha ngasentla, i-pls qha ga mshelana nodokotela wakho okanye ukhemisi ngokukhawuleza.
Indlela yokuthenga i-Mifepristone powder esuka kwi-AASraw